VOLJHANKA, AMA ARDUUG: SHARAXAAD KA KOOBAN NOOCYADA DHIRTA DILKA AH - DHIRTA XAYAWAANKA AH
Ugu Weyn Ee Dhirta xayawaanka ah
Noocyada Volzhhanka dilka ah
Arukus waxaa caan loo yaqaan Volzhanka, waa warshad beerta oo aad u badan oo qurxiyo qurux badan oo qurxin doona xagaaga xagaaga. Faa'iidada ugu weyn ee warshadu waa in Volzhanka uusan u baahnayn daryeel, wuxuu horumarin karaa wakhti dheer oo aan kormeerayn, wuxuu leeyahay noocyo iyo noocyo badan. Maqaalka ayaa sharaxaya noocyada ugu caansan ee Volzhanka iyo gaar ahaan beeritaankiisa beeraha.
Aruunkuna diyoecious, ama caadi ahaan (Ariqiyoolajiyam)
Waddanka Volzhhanka ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay gobollada Waqooyiga Yurub iyo Caucasus. Dhirta sida astilba, Hase yeeshee, waxay ka tirsan yihiin qoysas kala duwan, waxay leeyihiin kala duwanaansho ku saabsan midab iyo xajmiga. Volzhanka waxay ka timaadaa reerka Rosaceae, astilbe waa sawir-dhagax. Kala duwanaanshaha midabka ubaxa Astilba waa mid aad u qurux badan oo aan ku xirneyn "jinsiga" ee geedka. Ubaxa wuxuu noqon karaa midab, midab, midab, casaan ama casaan. Inkastoo gabdhaha Voljhanka inflorescences waxay noqon karaan oo kaliya caddaan, iyo rag - beige. Volzhanka inta badan waa ka weyn tahay qiyaasta astilbe, iyo ubaxyadu waa badan yihiin. Aruncus dioecious ee dhererka gaari karaa 2 m. The afkoda dhirta waa dheer, toosan, foomka duurka ilaa hal mitir in dhexroor. Caleemaha waa sida cayayaanka, waxay leeyihiin cayayaanka cufan. Blossoms ee ubaxyo yaryar (gogosha labka ah ee labka ah - beige iyo qaro, dheddig - caddaan iyo wax dhif ah). Qaabka qaabka inflorescence Volzhanka wuxuu u egyahay geed geedka kirismaska, dherer ahaan, waxay gaari karaan ilaa 50 cm.
Waqtiga ubaxu wuxuu dhacaa Juun iyo Julaay. Warshadu waxay leedahay ur tartan aad u fiican, sidaas darteed waa mid aad u jecel cayayaanka waxyeello u geysta. Bishii Sebtembar, Volzhanka wuxuu tuurayaa abuurka. Haddii lagu beeray ka hor December, ubaxa Volzhhanka waa in la filaa oo keliya saddex sano kadib.
Ma taqaanaa? Volzhanka si dhakhso ah ayey u socotaa. Haddii aad rabto in ay ka sameeyaan ay duurka qurux badan oo ka mid ah, googooyaa afkeed si joogto ah ka dib ubax. Warshadu waxay u dulqaadataa manjooyin afkoda iyo inflorescences, waxay qaadan karaan noocyo kala duwan oo joomatari ah.
Volzhanka dioecious way kala duwan tahay noocyada kale ee cabbirka weyn. Noocyada ugu caansan ee Volzhanka caadiga ah waxaa ka mid ah:
Kneifi - wuxuu leeyahay caleemo furan oo qurux badan, wuxuu gaaraa dherer ah 80 cm, qoyaan-jecel yahay;
Volzhanka Forest Jineya Fov - wuxuu gaaraa dhererka 2 m, duufaanku waa caddaan oo leh faro yar oo casaan leh;
Misty Lace - qiyaastii 70 cm sare, caleemaha cagaaran caleen, foomka duurka yar yar yar, ubaxa waxay leeyihiin hooska jilicsan jilicsan.
Arunkton amerikan (Aruunkana americanus)
Nederlandka noocyada noocaan ah waa gobollada Waqooyiga Ameerika. In dhererka geedka wuxuu gaaraa hal mitir. Waxay ku duugoobi kartaa dabayaaqadii May ilaa bartamaha June. Noocani waxay leedahay nudaha dheer, kaasoo loo kordhiyay 7 cm sanad walba. Volzanka Maraykanku waxay sameeyaan duurka yar ee duurka ka yar dioecious. Caleemaha noocyadaasi waa seddex jibbaar, waxay leeyihiin cagaaran cagaaran. Inflorescences waa mid yar oo cad oo midab leh, oo u eg qaababkale. Ubaxa American Volzhanka ma aha sida xajmiga ah sida caadiga ah, oo sidaas daraaddeed ma u muuqdaan mid qoto dheer. Iyada oo ay sabab u tahay koritaanka hoose ee duurka, nooc noocan oo kale ah waa mid caan ah. Xayawaanka waxaa badanaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka.
Volzhanka waxaa lagu faafiyaa caawimaadda abuurka, petioles ama kala qaybsanaanta xididdada. Si loo abuuro naqshad muuqaal ah ayaa ka fiican sidii loo dooran lahaa dhalmo iyadoo loo qaybinayo xididada.
Waa muhiim! Inta lagu jiro faafinta daaqsinka, hubi inaad ka tagto qayb kasta oo duurka ah oo ah dhowr xididada iyo ugu yaraan hal buduun. Qaybaha kala duwan ee baadiyaha ka dib kala qaybinta waa in isla markiiba loo beeray dhulka, haddii kale dhirta ayaa dhiman doonta.
Arunkiya Asiatic (Arakti Asiaticus)
Noocyadaasi waxay ka timaadaa Siberia, waxaa loo tixgeliyaa dherer. In height dhererka laba mitir. Leaves Volzhanka laba jeer pinnate, midab cagaaran qani ku ah. Waxay ka duwan tahay noocyada kale by habka xididka gaaban, qalafsan iyo caleenta caleenta yar yar, iyo ubax cufan. Inflorescences waa kuwo yaryar, gaaraya illaa 40 cm oo dherer ah. Blooms Bisha Juun.
Asian Volzhhanka sidoo kale way kala duwan yihiin iska caabin adag oo dhaxan. Duurjoogta, waxaa laga heli karaa aagagga aagga kaynta ee Siberia, Bariga Shiinaha. Penumbra Prefers iyo ciidda bacrin ah, qoyaan-jecel. Inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo deyrarka, derbiyada.
Duurjoogta, noocan oo kale ah waxaa laga heli karaa Bariga Dhexe, Alaska, Kuuriya, Sakhalin, Kamchatka, Okhotia, Arctic, iyo Japan. Dhexdhexaadku wuxuu gaari karaa 30 illaa 150 cm.Waxay leedahay nidaam xidid adag oo awood leh. Wuxuu ka tagaa laba wiqiyadood. Inflorescences waa ka badan, yar yar oo jeexjeexan, oo gaadhaya dherer 20 cm Aruunkani noocyada noocaas ah wuxuu ku jiraa bilaha 7aad iyo 8aad. Bisaylka abuurka wuxuu dhacaa Sebtembar.
Penumbra Prefers. Inta badan loo isticmaalo diiwaangelinta aagagga baarkinka. Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee noocyadaas waa Alpine. Qulqulaha dhererka gaaban (30 cm), baadiyaha yaryar ee yaryar.
Ma taqaanaa? On Sakhalin, cawska guga dhalinyarada ah ee Volzhanka Asia diyaarinaya suxuunta aad u dhadhan fiican, qallajin iyo karkaraya caleemaha.
Shiine Arunkus (Arsenk sinensis)
In height dherer ka mid ah ilaa hal mitir iyo badh. Caleemaha waa oval, laba goynta, oo leh qaab muuqaal ah oo muuqaal ah. Waxay leeyihiin midab qurux badan oo qurux badan oo leh jilay buni ah. Florescences ee caddaan iyo kareemadu waxay u egtahay ilaa 25 cm oo dherer ah, ma ahan qaro weyn, oo si adag loo jeexay. Dhirta ayaa doorbidaya goobaha khafiifka ah ee dhulka leh iyo carrada qoyan. Ciid kasta oo ku habboon beerto: bacaadka, dhoobada, dhoobada. Waxa ugu muhiimsan ee daryeelka waa in lagu ilaaliyo qoyaanka ciidda iyo ku quudiyaan bacriminta organic. Volhohanka noocan oo kale ah waxay u egtahay mid aad u fiican oo ku xigta barkadda ama balli.
Waa muhiim! Ka ilaali Volzhhanka Shiinaha ka soo iftiin badan. Haddii kale, caleemuhu waxay heli doonaan midab huruud ah, oo dhirta si degdeg ah u gubi doonaa.
Arunkus korolischelistny (Aruunki aethusifolius)
Dhirta noocyada noocaas ah waa kuwa ugu hooseeya ee ugu caansan. Volzhanka kokoryshelistnaya ee height dhererka 25 cm. Ubax waa mid aad u qurux badan oo qarsoodi ah. Caleemaha waa qallayl, cagaar madow oo midabo ah iyo quruxda qorraxda. Inflorescences creamy white, ku yaal waxoogaa kor ku xusan caleemaha. Bloom-caleemaha noocan oo kale ah laga bilaabo Juun ilaa Luuliyo. Isku xirka Volzanka waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo xuduudaha, sidoo kale waxaa lagu kori karaa dheriyada guriga. Warshadku waa mid waxtar u leh bacariminta Bacriminta dabiiciga ah.
Ma taqaanaa? Xilliga dayrta, caleemaha Arunus kokorishelistnogo waxay helayaan maro qurux badan. Hal meel ayaa dhirta ay kori kartaa ilaa 10 sano.
Waxay u egtahay xayawaannada hoos yimaada. In height, duurka u gaaro 30 cm, cufan oo aad u cufan. Inflorescences waxay leedahay kareem iyo midab cad. Aad u dheer, cufan, kor u kacay height ah 30-50 cm kor ku caleenta. Caleemuhu waa yar yihiin, cagaar mugdi ah, oval-qaabeeya.
Noocyada ugu caansan ee noocyada noocan ah waa Ruuxa Noble. Daaqadiisu waxay leedahay dherer 25cm oo keliya. Ubax Noqo Runtii waa mid balaadhan oo xiiso leh bisha Juun iyadoo leh ubaxyo barafka cad iyo cad. Ka dib markii ubaxyada ubaxyada korka ku haya qurxinta, helitaanka midab madow, kaas oo laga sameeyay bisaylka abuurka. Kala duwanaanta noocaas ah waxaa sidoo kale lagu kori karaa dheriyada guriga ee daaqadaha. Wixii horumar ah oo wanaagsan, dhirta u baahan yahay ciidda qani ah, dabacsan, ciidda la miiray.
Waa muhiim! Waa in la gooyaa fooriyadaha Volkhanka isla markiiba ka dib marka la gooyo, iyo dayrta, gooyaan caleemaha caleemaha waa in la sameeyaa, marxaladdana waa 3-5 cm oo sarreeya, nidaamyadani waa lagama maarmaan si loo hubiyo in nidaamka xididku ku filan yahay in uu ku filan yahay walxo waxtar leh oo ka soo baxaya ciidda iyo geedka si firfircoon u horumariyo sanadka soo socda.
Marka lagu daro noocyada ugu muhiimsan, takhasusayaasha ayaa horumariyay noocyo badan oo isdhexgalka Volzhhanka ah. Waxa lagu gartaa koboc aad u hooseeya, isdhaafsashada duurka iyo noocyo kala duwan oo ubax ah. Noocyada ugu caansan waxaa ka mid ah:
Johannisfest - illaa 35 cm sare, caleemaha waa kuwo jilicsan, qalafsan. Ubadka waa kareem leh jilbaha casaanka ah, qaab muuqaal ahaan u taagan jilbaha fudud ee wax yar. Kala duwanaantu waa u-dulqaadanaysa abaar.
Waldemar Meyer - illaa 50 cm oo sarreeya Cagaarshow, cagaar mugdi ah, dhalaalaya qorraxda. Maadada waa casaan, cufan. Inflorescences waxay leedahay madow cad oo casaan leh. Muddada ubaxu wuxuu ka bilaabmaa Julaay ilaa Agoosto.
Hadda waxaad taqaanaa waxa Volzhanka yahay iyo maxay yihiin noocyada ugu caansan ee warshadan. Beerta iyo beeraha jecel waxay leeyihiin ubax qurux badan oo loo isticmaali karo in lagu qurxiyo goob beerta ah ama aag park.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta xayawaanka ah 2019